Tirokoob-NAV: Soomaalida ayaa ugu badnaa dadkii shaqeynayay Coronaha. - NorSom News
Tirokoob-NAV: Soomaalida ayaa ugu badnaa dadkii shaqeynayay Coronaha.
Xanibaada ka dhalatay xakameynta xanuunka Corona ayaa tan iyo bishii Maarso sababtay in boqolaal kun oo qof oo Norway kunool laga fariisiyo shaqada, waxaana toban jibaar ka badan kor u kacay tirada dadka shaqo la´aanta ah ee Norway ku sugan.
Xafiiska shaqada ee NAV ayaa soo bandhigay tirokoob laga sameeyay guud ahaan dadka shaqo la aanta noqday ama shaqada laga fariisiyay corona dartiid, magaalooyinka ay kunoolyihiin iyo waliba meelaha iyo baraanjiyada ay ka shaqeyn jireen.
Sidoo kale tirokoobka ay NAV soo bandhigtay waxaa kamid ahaa qodob lagu soo bandhigay wadamada ay kasoo jeedeen ajaaniibta shaqada laga fariisiyay intii uu socday xanuunka Corona, gaar ahaan kuwa iska diiwaangaliyay NAV.
Soomaalida ayaa ugu badan dadka shaqeynayay ee ajaaniibta ah:
Tirokoobka NAV ayaa lagu soo bandhigay in dadka kasoo jeedo dalka Sweden ee Norway ka shaqeeya ay ugu badnaayeen dadkii shaqada laga fariisiyay xiligii wadanka la xiray Corona Awgiis. Waxaana arintaas lagu sababeeyay in Swedishku ay badanaa ka shaqeeyaan maqaaxiyaha kaffe-ga lagu cabo, maqaaxiyaha cuntada iyo goobaha kale oo lagu caweeyo ama service-ka laga bixiyo.
Dhanka kale, Tirokoobka NAV waxaa lagu sheegay in soomaalida ay yihiin ajaaniibta uu saameynta ugu yar ee dhanka shaqada uu ku yeeshay xanuunka Corona, waxeyna soomaalidu ahaayeen ajaaniibtii ugu badnaa ee shaqeynayay intii uu socday Corona-virus. Waxaana arintaas lagu sababeeyay in soomaalidu ay ka shaqeeyaan shaqooyinka adeega bulshada, sida Tagaasida, Bussaska, dhaqmada iyo caafimaadka. Shaqooyinkaas oo ahaa kuwo aad loogu baahnaa ama u shaqeynayay xiligii Coronaha ama uusan saameyn xoogan ku yeelan xanibaada xanuunka
Xigasho/kilde: Arbeidsledige under koronaen: Svensker svært hardt rammet. Somaliere har klart seg best.
Previous articleBooliska: Waxaan rabnaa in la mumnuuco guurka ilmo-adeerada/Habreedka.
Next articleMacalimiinta luuqada Norwiijiga: Hala joojiyo shardiga adag ee luuqada ah ee qaadashada dhalashada Norway lagu xiro.